Burcadbadeed ku xirnayd Seycheles oo loo soo wareejiyay Puntland (Sawiro) – Radio Daljir
Maarso 4, 2013 8:58 b 0
Bosaso, March 04 – Waxaa maanta laga soo dajiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Bosaaso 9- maxbuus oo burcadbadeed ah oo horay maxkamad kutaalla Jaziiradda Seycheles ay ku xukuntay xabisyo sanado ah.
Maxaabiista lasoo wareejiyay ayaa qayb ka ah heshiis dhexmaray Puntland iyo Seycheles oo Puntland lagu soo wareejinayo 25- maxbuus oo burcadbadeed ah oo ku xiran Seycheles.
Wasiirka dekedaha, gaadiidka badda iyo la dagaalanka burcadbadeeda Puntland Eng. Saciid Maxamed Raage ayaa wariyeyaasha ugu sheegay gudaha garoonka maxaabiistan inay xabsiga inta ugu dhiman ku qaadan doonaan Puntland.
Kaaliyaha booliska jaziiradda Seycheles Joseph oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay heshiiska maxbuus soo wareejinta inay horay ula saxiixdeen Puntland, xabsiyada Puntland ayuu sheegay inay yihiin kuwo kuhaboon in lagu hayo maxaabiista burcadbadeeda.
Dowladda Puntland ayaa horay u sheegtay inay hirgalisay xabisyo waawayn oo ay taageertay hay’adda UNODC , xabsiyada Puntland laga dhisay ayaa u qalabaysan xabsiyada caalamiga ee lagu xiro dadka dambiyada gala.